IHut yabelusi abaNtofontofo eSekelwe eCotswolds
Indlu encinci enamavili sinombuki zindwendwe onguJames & Nick
I-Hill Farm Shepherds Hut ikwikona yentsimi yeehektare ezili-15 kunye neembono ezingaphazamisekiyo zamaphandle e-Cotswold, apho unakho ngelixa ukude ngorhatya lokujonga iinkwenkwezi. Indawo entle yokuphumla kunye nokuphumla ngokukhetha ukusebenzisa ibhafu eshushu eyenziwe ngamaplanga. I-Hut ibucala kakhulu kunye nomkhondo wayo kunye nokupaka.
Yakhiwe kwaye yafakwa kumgangatho ophezulu, indlwana inesitovu samaplanga, ukufudumeza ngaphantsi, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, ibhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela le-insuite. Ibhedi yenkosi esisigxina inomandlalo obutofotofo, amashiti e-cotton angama-200 kunye nemibono emangalisayo. Ikhitshi ine-oveni ye-microwave edibeneyo, i-hob ephindwe kabini, ifriji enendawo encinci yesikhenkcisi, isinki yaseBelfast, iketile, itoaster kunye nomatshini wekofu weNespresso (nceda uze neepods zakho). Ukukhethwa kweglasi (i-champagne, iwayini, ibhiya kunye ne-tumblers) izitya, i-cutlery, ukupheka kunye ne-bbq.
Ngaphandle kukho i-bbq, indawo yokucima umlilo, izitulo ezitofotofo zokuphumla ezenziwe ngamaplanga kunye neeragi zokukugcina ushushu.
Kukho ukhetho oluhle lwee-pubs zasekhaya kunye nezinto ezithathwayo ngaphakathi kweemayile ezimbalwa zeFama yase-Hill. IMalmesbury yidolophu entle yentengiso (iikhilomitha ezi-3.5) kwaye inoluhlu oluhle lweevenkile ezizimeleyo ezibandakanya iibhula, iDelicatessen, indawo yokubhaka, izipho kwaye yaziwa kakhulu ngeAbbey Gardens. Ezinye izinto ezinomtsalane ezikufutshane ziquka iTetbury, iCirencester, iWestonbirt Arboretum, iLacock, iCastle Combe kunye neCotswold Water Park.
Umbuki zindwendwe ngu- James & Nick
I-Shepherds Hut imi kwikona yentsimi, ekungenwa kuyo ngomsantsa okwiheji. Ikunika ubumfihlo obufihlakeleyo, nangona kunjalo iFama ayikho kude ukuba siyafuneka!
UJames & Nick yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Charlton